Earth Oghere Digger, Oghere Machine Machinewa, Log Splitter - Dongheng Machinery
EZE ọ earthụ auger mbanye e mepụtara na mmalite nke Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. oruru. N'ihi ya, anya, anyị nwere ọtụtụ nke n'ichepụta na ire ahụmahụ a field.With stably elu àgwà na obosara àmà dịgasị, anyị na-eme Eze akara ọma reputed na ahịa.GỤKWUO
EZE cone log splitter maka oke ohia bụ mgbanwe na-ndokwasa na excavator, skid iduzi, backhoe Load wdg Ọ bụ nchebe karịa n'aka log splitter dị ka usual.Surface hardening pụrụ iche ọgwụgwọ na ịghasa cone pụtara na ọ ga-egosi ike na-egbusi arụmọrụ na elu arụmọrụ n'oge osisi osisi.GỤKWUO
KINGER hụrụ isi jiri ihe ndị pụrụ iche na mbara ala, nke nwere arụmọrụ dị elu na ogologo ndụ ọrụ. Ọ nwekwara ike ịbawanye oke ọrụ oke ọhịa.GỤKWUO
Ogo bụ omenaala anyị
24-awa Online Ọrụ
Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. e guzobere na 2010 wee bụrụ onye ndu ọnọdụ na excavator Mgbakwụnye igwe na a ngwa ngwa ijeụkwụ. Companylọ ọrụ anyị agafeela ISO9001: nyocha 2015 na CE. Anyị bụ ndị mba elu-tech enterprise na ọrụ, ịpụ iche na ọhụrụ. Companylọ ọrụ anyị nwere ikike ọgụgụ isi nke onwe ha. Ruo ugbu a, anyị enwetara ihe karịrị ikike iri atọ. Nke ahụ mere ka Dongheng bụrụ onye ndu na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ihe owuwu ndị China.
Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. na-agba mbọ iji R&D, rụpụta na-ere excavator mgbakwunye maka ewu, ugbo na oke ohia igwe. KINGER isi azụmahịa nwere Mini excavator, Earth auger, Log splitter, Log grapple, Saw head, Mixer ịwụ, igwekota efere, Hedge trimmer, Chain trencher, Osisi shiee, Stump planer, Hydraulic hama, Ndenye coupler, Ibulite ahịhịa na ndị ọzọ na-ewu ígwè ọrụ na mgbakwunye.
Ngwaahịa anyị jiri nkà na ụzụ ọhụrụ dị elu, tinye ya na ihe kachasị mma ma kwado ya site na nyocha dị iche iche na ule nyocha iji jide n'aka na àgwà ahụ dị mma na arụmọrụ ka mma. Na mgbakwunye, anyị kwupụtara ọla edo soplaya na Alibaba.We nwere ike ịnapụta ngwongwo 100% na oge na-ekwe nkwa.
Anyị na-enye 24-hour oru nkwado zuru ezu na ọrụ ntanetị.Ọ bụ n'ihi na anyị nwere ndị R&D nke anyị, ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka na ngalaba ọrụ aka, anyị nwere ike inye gị aka aka. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla mgbe ịzụrụ ngwaahịa ọ bụla anyị, biko egbula ịhapụ anyị ozi. Anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo enwere ike ịlele.